Myanma News » စိုင်းစိုင်းသို့ SNK	9
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကတောက်။
Ma Ma says: ဟုတ်ပ့ါ၊ ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး အပြေးဝင်လာတဲ့သူကို အမောဆို့သွားစေတာကိုးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: Naw Kham
“WHEN I visited [South-East Asia] three years ago, it was the 12th-largest economy in the world,” said David Cameron, Britain’s prime minister, fromastage at the National University of Singapore on July 28th. “Now it’s the seventh, and it’s predicted to be the fourth-largest single market by 2030.” Longtime South-East Asia watchers may struggle to suppressacynical smile at Mr Cameron’s mention ofa“single market”: making the ten-country Association of South-East Asian Nations (ASEAN) intoasingle market is one of those political goals that has been just around the corner for years. But the fundamental point is true enough. ASEAN isalarge and growing market, with which Britain does surprisingly little business. Mr Cameron noted that Britain trades more with Belgium than it does with the four countries on his itinerary (Indonesia, Malaysia, Singapore and Vietnam) combined.
ဦးကြောင်ကြီး says: အနော်ကဒေါ့ cat ခြင်း cat နောင်၁၅နှစ်မှာ ရှယ်ဖြစ်လာမည့် သန်ဆင်ခိုင်လေး ပါပါး ကြောင်က္ခထီး မာမွတ်ခိုင်မ်ကိုပဲ catမည်။
ဦးကျောက်ခဲ says: “တော်ကြာ.ဟိုက.. ဘိုဂျုပ်ကြီးတွေ ပိုင်ဆိုင်ငွေမောင်ပိုင်စီးပလိုက်ရင်.. ဘယ်နှာလုပ်မလဲ..”
မြစပဲရိုး says: ဟုတ်ပါ့။
အဘ တို့ စီလုတ်က လာတဲ့ ပဲနီ စီလုတ် ထဲ ပြန်သွား ဖြစ်တော့ မလား မသိ။ သိပ်လဲ နှမြောမနေပါနဲ့။ အလကား ရထားတာဘဲဟာကိုများ။
YE YINT HLAING says: စီလုပ် က ဒါဆိုဒါပဲ ဟိုဟာလာမလုပ်နဲ့
အောင် မိုးသူ says: စိုင်းစိုင်းဆိုလို့ အူးကြောင်တို့ကတော့နော်။
Alinsett @ Maung Thura says: .စိုင်းစိုင်းကိုပဲ… မရှင်းမရှင်း ခေါင်းစဉ် တပ်ခွင့်ပြုသည်။